International Campaign for Freedom of Aung San Suu Kyi and Burma: BURMA NEWS INTERNATIONAL:: 16 July 2008
BURMA NEWS INTERNATIONAL:: 16 July 2008
Rats on the rampage in western Burma
Rats multiplying after devouring bamboo flowers are attacking hillside farms and destroying crops in Chin state in western Burma.
Eleven ethnic Padaungs still missing
Chiang Mai – Eleven ethnic Padaungs from Mae Hong Song district, Northern Thailand are still missing.
New Delhi – The Burmese military junta has extended an invitation to Ibrahim Gambari, UN Special envoy to Burma , to visit the country in mid-August. The visit has to do with resuming talks with the regime and the opposition,aUN spokesperson said on Tuesday.
Motorcyclists without license on the rise
The number of people owning and driving motorcycles on the Thai-Burma has gone up since the beginning of this month after the Burmese regime started granting license to unregistered two wheelers.
Seven members ofafamily were allegedly killed in Sora Pheku village, Phe Khon Township, southern Shan state after junta authorities founda'no vote campaign' flyer in front of the house.
Trial of Burmese business tycoon Maung Weik begins
Chiang Mai – In one of the bigger scandals that have rocked Burma ,asecret and special tribunal in the country's notorious Insein prison on Monday commenced the trial of business tycoon Maung Weik. He is charged with alleged abuse and trafficking in drugs.
စစ်တွေတွင် နအဖ စစ်အစိုးရနှင့် ဆက်စပ်မှု ရှိသော အအေးခန်း တချို့ ပိတ်လိုက်ရ
Wednesday, 16 July 2008 13:26
ရခိုင်ပြည်နယ် စစ်တွေတွင် နအဖ စစ်အစိုးရနှင့် နီးစပ်မှု ရှိသော ပုဇွန် ထုတ်လုပ်သည့် အအေးခန်း တချို့ကို များမကြာခင်က ပ်ိတ်လိုက်ရကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
Wednesday, 16 July 2008 13:22
ဒေါ်စုလွတ်မြောက်ရေး တောင်းဆိုသူများကို ဆူပူအောင် လှုံ့ဆော်သည်ဟု စွပ်စွဲ
Wednesday, 16 July 2008 13:19
ချင်းမိုင်။ ။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ မွေးနေ့တွင် ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရသည့် အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ဝင် ၁၄ ဦးအား အာဏာပိုင်များက ဆူပူမှုဖြစ်အောင် လှုံ့ဆော်မှုဖြင့် တရား စွဲဆိုလိုက်သည်။
နာဂစ်မုန်တိုင်းအပြီး ကြော်ငြာဘုတ်ထောင် လုပ်ငန်းများ အထိနာ
Wednesday, 16 July 2008 12:06
နယူးဒေလီ။ ။ လူပေါင်း ၂.၄ သန်း ခံခဲ့ရသည့် နာဂစ်ဆိုင်ကလုံး မုန်တိုင်း၏ ဒဏ်ရာဒဏ်ချက်များကို စီပွါးရေးနယ်ပယ်၊ အထူးသဖြင့် ရန်ကုန်မြို့တော်၏ ကြော်ငြာစီးပွါးရေး လုပ်ငန်းတွင် တွေ့နေရဆဲ ဖြစ်သည်။
Wednesday, 16 July 2008 12:00
နယူးဒေလီ။ ။ စစ်အစိုးရနှင့် အတိုက်အခံများအကြား ဆွေးနွေးပွဲများ ပြန်လည်စတင်နိုင်ရန် သြဂုတ် လလယ်ပိုင်းတွင် မြန်မာနိုင်ငံသို့ လာရောက်လည်ပတ်ပါရန် မြန်မာစစ်အစိုးရက မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ကုလအထူးသံတမန် မစ္စတာ အီဗရာဟင် ဂမ်ဘာရီကို ဖိတ်ကြားခဲ့သည်ဟု ကုလသမဂ္ဂ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူက အင်္ဂါနေ့တွင် ထုတ်ဖေါ် ပြောဆိုလိုက်သည်
Wednesday, 16 July 2008 11:56